Kenya” Hadii la doonaayo in Soomaliya ay Nabad Noqoto Waxaa qasab ah in Beesha Caalamka ay….. – Kismaayo24 News Agency
Kenya” Hadii la doonaayo in Soomaliya ay Nabad Noqoto Waxaa qasab ah in Beesha Caalamka ay…..
by Tifaftiraha K24 30th July 2016 059
Aamina Maxamed Jibriil, wasiirka arrimaha dibedda dalka Kenya,ayaa Beesha Caalamka usoo jeedisay in la sii wado taakulaynta loo fidiyo ciidamada howl galka Midowga Afrika ee Soomaaliya. hadii la rabo in nabad waarta laga gaaro geeska Afrika.
Aamina oo qudbad ka jeedisay kulanka golaha ammaanka Qaramada midoobey ee ka dhacay magaalada New York, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la taageero Ciidanka Amisom haddii la doonayo bey tiri inay Soomaaliya iyo gobolkaba nabad gelyo noqdaan.
Wasiiradda ayaa walaac ka muujisay mushaar dhimista lagu sameeyay Ciidamada Amisom,waxanay carrabka ku adkaysay in lasii joogteeyo taageerada dhaqaale ee la siiyo hawl-galka midowga Afrika.
Aamina Maxamed ayaa sidoo kale sheegtay in mushaar dhimistii uu sameeyay Midowga Yurub ay keentay caqabado badan, waxanay ka dalbatay Golaha Ammaanka inay fiiro gaar ah u yeeshaan arrimaha la xiriira taageerada Amisom.
Dowladda Kenya ayaa marar badan ka hadashay caqabadaha dhanka dhaqaalaha ee soo wajahaya Amisom, markii ay midowga Yurub jareen 20% mushaarkii ay qaadanayeen Askarta Soomaaliya ka joogta Midowga Afrika.
War Hada: Erdogan oo Eedeyn kulul kala Dul dhacay Xubin Sare oo ka tirsan Milatariga Dalka Mareykanka
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo Xalay ka dhacay Deegaan aan ka Fogeyn Magaalada Ksimaayo ee G.Jubbada hoose???
Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku dagaallamay Gobolka Bakool
Ahmed sudani 16th April 2018
DEG DEG: Guddoomiye taabit oo xilalkii ka xayuubiyay dhamaan guddoomiye ku xigeenada gobolka oo mudo sanado ah kursiga ku fadhiyay+Magacyada
Tifaftiraha K24 24th April 2017 24th April 2017